Isikhokelo sabaqalayo kwizivumelwano zengqesho
Ukufumana abagqatswa abafanelekileyo ukuba bazalise izithuba kwinkampani yakho inokuba ngumsebenzi ngokwawo. Emva kokuba ufumene umgqatswa ogqibeleleyo, kuya kufuneka ubaqeshe ngokusesikweni ukuze bagqibezele inkqubo. La maxwebhu anceda ukukhusela abaqeshi kunye nabasebenzi.
Isivumelwano sengqesho sisivumelwano esibhaliweyo esibophelelayo esichaza ubudlelwane kwezengqesho phakathi kombutho nomqeshwa. iza nazo zonke iintlobo ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Kwiimeko ezininzi, ileta esesikweni yokubonelelwa kunye nencwadana yesikhokelo yomqeshwaIsayiniwe inokwanela ukugubungela zonke iziseko.
Nangona kunjalo, izivumelwano zengqesho zinceda ukususa ukungacaci kubudlelwane kwaye ichaze ngokucacileyo ukuba kulindeleke ntoni kumqeshwa nakumqeshi. ngokwesiqhelo kulomdla wakho ukudala isivumelwano esisesikweni.
Isiseko seekhontrakthi zengqesho
Imigaqo yesivumelwano sengqesho iya kuba yodwa kwingqesho entsha nganye. Nalu uluvo olunzulu ngakumbi lwezinto eziqhelekileyo ukubandakanya ikhontrakthi yengqesho:
Inkcazo yomsebenzi, uxanduva kunye noxanduva
Eli licandelo elibalulekileyo kwisivumelwano ngasinye sengqesho. Olu xwebhu kufuneka luchaze ngokucacileyo okulindelweyo kunye noxanduva lwesikhundla ekuthethwa ngaso.
Endaweni yokugxila kwimisebenzi yemihla ngemihla yesikhundla, gxila ngakumbi kulindelo ngokubanzi kunye noxanduva.
Umzekelo, ukuba uqesha iseva yokutya, awudingi ukongeza iinkcukacha ezinje "ukuthatha ii-odolo zabathengi "kunye" nokuzisa ukutya ezitafileni "kweli candelo lesivumelwano. Kwelinye icala, ezi ziyinxalenye ebonakalayo yomsebenzi. Enye into, kubandakanya iinkcukacha ezininzi kakhulu ishiya umnyango uvulele abasebenzi ukuba bathi "ayingomsebenzi wam" xa ubacela ukuba benze into.
Imigaqo yengqesho iyawa ngokubanzi kwelinye lala macandelo mathathu: isigxina, okwethutyana okanye ikota.
Uninzi lwabaqeshi lubala iiyure ezingama-40 njengomsebenzi osisigxina. Kodwa inkcazo yezomthetho yengqesho yexesha elizeleyo iyahluka ukusuka kurhulumente ukuya kurhulumente. Umzekelo, amanye amazwe achaza umsebenzi osisigxina njengeeyure ezingama-32 ngeveki. Ingqesho yexeshana ngokubanzi ikuluhlu lweeyure ezingama-20 ukuya kwezingama-30 ngeveki, kodwa isenokuba ngaphantsi kwento ethathelwa ingqalelo ngokusisigxina kulo mmandla.Zichazwa ngokusisigxina ngaphandle komhla wokugqitywa kwangaphambili.
Abasebenzi bexesha elimiselweyo baqeshwa kuphela ixesha elithile. Olu lwalamano luya kuba nomhla wokuqala wokuqala kunye nomhla wokuphela kwisivumelwano. Ngokungafaniyo neekontraki ezizimeleyo, umqeshwa wexesha elimiselweyo uphathwa njengomqeshwa oqhelekileyo ngalo lonke ixesha lesivumelwano.
Ezinye izivumelwano zengqesho ziya kubandakanya iintsuku, iiyure kunye nezinye izinto zeshedyuli. . Oku kuyinyani ngakumbi ukuba umqeshwa kufuneka asebenze iiyure ezingaqhelekanga, ezinje ngobusuku nangeempelaveki. isibonelelo sengqesho "ngokuthanda" Oku kuthetha ukuba naliphi na iqela linokuphelisa ubudlelwane, ngaphandle kwesizathu, nangaliphi na ixesha.
"Omnye umsebenzi" unokuchazwa apha. Umzekelo, uninzi lwabasebenzi baseburhulumenteni abavumelekanga ukuba bafumane umsebenzi wesibini ophikisana nemisebenzi yabo esemthethweni.
Ngokucacileyo, imigaqo yentlawulo iya kuba yinxalenye enkulu yayo yonke into yesivumelwano sengqesho. >
Eli candelo kufuneka lichaze ngokucacileyo umvuzo, umvuzo okanye ikhomishini yomqeshwa ekwakukuvunyelwene ngaphambili phakathi kwala maqela mabini. Kwakhona zibandakanya amaxesha okuhlawulwa, naluphi na ulwazi malunga nolwakhiwo lwebhonasi okanye ukhetho lwentengo kwisivumelwano.
Imbuyekezo Icandelo lokuhlala kufuneka likhuphe naziphi na izibonelelo ozibonelelayo njengenxalenye yesivumelwano. Oku kungabandakanya i-401 (k) ukuthelekisa, i-Medicare, amazinyo, izibonelelo zabakhweli, usapho kunye nekhefu lonyango, iiakhawunti zokonga impilo, njl. ingqesho entsha yengqesho. Ukuba izibonelelozixhomekeke kutshintsho, kungcono ukuba ungabandakanyi kwisivumelwano.
Ezinye izivumelwano zengqesho zibandakanya igatya lokuqhawula inkonzo. Ngelixa kunganyanzelekanga ukuba ubonelele ngomvuzo wokuyeka emsebenzini, oko kunganceda ukubeka abasebenzi kubakhululeke kwaye kubenze bakhululeke ngakumbi ekusayineni ikhontrakthi. izibophelelo ekufuneka umqeshwa kunye nomqeshi bahlangane nazo emva kokuphela kwesivumelwano.
Abanye abasebenzi banokucelwa ukuba batyikitye ukungachazi, ukungacengi okanye ukungakhuphisani. Oku kuyabathintela ekwabelaneni ngeemfihlo zorhwebo okanye ukuba kubathengi.
Ezi ntlobo zezivumelwano ziyahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lweshishini kunye nendawo ekuthethwa ngayo.
Umzekelo, igqwetha elisebenzela umthetho ifemu inokuthintelwa ekusekeni inkampani yabo ngaphakathi kweekhilomitha ezingama-80 kangangeminyaka emibini emva kokuqesha phantsi kwegatya elingakhuphisani.>
Soloko ubonisana negqwetha elinamava xa usenza ezi ntlobo zamaxwebhu ukuqinisekisa ukuba ziyabophelela ngokwasemthethweni kwaye ufumana ukhuseleko olufunayo. Nakuphi na ukungaxoli kula maxwebhu akunakuma enkundleni.
Izixhobo ezi-5 zokuphucula izivumelwano zengqesho
Ukwenza izivumelwano zengqesho kunokubonakala kungumsebenzi otyhafisayo, ngakumbi kwabaqalayo. Kodwa ezi zixhobo zintlanu ziya kwenza ubomi bakho bube lula kuyo yonke le nkqubo:
yinkokeli kushishino lwamaxwebhu asemthethweni akwi-Intanethi. Banceda amashishini amancinci naphakathi ngeenkonzo zomthetho ukusukela kwiinkonzo zokubandakanya ukuya kwindalo yamaxwebhu. I $ 39.99 nje ngenyanga, unokwenza izivumelwano zengqesho ezininzi njengoko ufuna.
Ngenye indlela, abasebenzisi bevolumu ephantsi banokusebenzisa iRocketIgqwetha nge $ 39.99 kuxwebhu ngalunye. Kodwa umrhumo wenyanga ulixabiso elingcono, kuba uyakuxhamla nakwezinye iinkonzo zegqwetha. Ungasebenzisa iGqwetha leRocket kwi-NDAs, ungakhuphisani, ungaceli, njl.
Yizame simahla ngesilingo seentsuku ezisixhenxe .
ibonelele ngeenkonzo zomthetho ngaphezulu kwezigidi ezi-4 zabathengi kunye neenkampani ezingaphezu kwezigidi ezi-2, iyenza enye yazo ezona zisombululo zomthetho zidumileyo online ziyafumaneka. Iqonga liza neetemplate zemvumelwano yengqesho onokuthi uyenze ngokwezifiso kwimizuzu. Phendula nje imibuzo embalwa elula, kwaye iLegalZoom izakugqibezela ikhontrakthi yengqesho yakho.
Ukongeza kwizivumelwano zengqesho, i-LegalZoom ine-non-expression, non-solicitation, izivumelwano ezingekho khuphiswano kunye nolunye uxwebhu olusemthethweni wenaunokufuna ngexesha lenkqubo yokuqesha. Unokuqhagamshelana neengcali zabo zomthetho ukuze uphendule imibuzo yakho kwaye uqiniseke ukuba iikhontrakthi zisemthethweni. Izicwangciso zeshishini zeLegalZoom ziqala kwi- $ 31.25 ngenyanga
I-BambooHR sisisombululo sabantu bonke esisinye ngezixhobo zokugaya, ukuqesha nokudibanisa abasebenzi abatsha. Isoftware iza nezinto ezakhelwe-ngaphakathi kwisiginitsha yokunceda ukuhambisa amava okukhwela ngaphakathi. Ungasasaza ikhontrakthi yengqesho kwaye uqokelele utyikityo olusuka kwimisebenzi emitsha ngokusebenza kakuhle. Nje ukuba idityaniswe, zonke iikhontrakthi zabasebenzi kunye nolunye ulwazi olubuthathakazingagcinwa kwiziko ledatha le-BambooHR.
Nxibelelana ne-bambooHR yesicatshulwa kunye nedemo yokuqalisa .
# 4 - IPandaDoc
Ukuba ukulungele ukwenza ikhontrakthi yengqesho kodwa ungazi ukuba ungaqala ngaphi, IPandaDoc ikugubungele. Ungasebenzisa eli qonga ukufumana itemplate yesivumelwano sengqesho simahla. Konke okufuneka ukwenze ngoku kukugcwalisa iinkcukacha zenkampani yakho kunye nokuqasha kwakho okutsha, emva koko ulungile ukuba uhambe. izixhobo zokusebenza. Isoftware sisisombululo esipheleleyo solawulo lwesivumelwano, ke ngoko kukho iitoni zeempawu ezipholileyo zokwenza ubomi bakho bube lula. Izicwangciso ziqala nge-19 yeedola ngenyanga, kwaye ungayizama simahla kangangeentsuku ezili-14.
NgabacuSign lelona gama laziwayo kwindawo yesiginitsha ye-elektroniki. Ngaphezulu kwabathengi abangama-750,000 basebenzise eli qonga ukuququzelela amakhulu ezigidi zokutyikitywa kwihlabathi liphela. Isoftware ilungele ukutyikitywa kwe-elektroniki kunye nolawulo lobomi bekhontrakthi.
Naliphi na ishishini elinokusebenzisa iDocuSign ukuthumela, ukusayina kunye nokuqokelela iisayinithi zeekhontrakthi zabasebenzi. Nokuba ufuna ukuyenzela umqeshwa omnye okanye ufuna ukuqesha kwizinga elikhulu, iDocuSign ikubekile. Izicwangciso ziqala ukusuka kwi-10 yeedola ngenyanga kwaye ungazama mahhala ngesilingo seentsuku ezingama-30. Iingcebiso ezi-4 zokwenza izivumelwano zengqesho
Ukufumana uninzi lwamava akho esivumelwano sengqesho. , landela ezi ngcebiso zikhawulezayo kunye neendlela ezilungileyo. Njengabaqalayo, ezi ngcebiso zilula ziya kwenza ubomi bakho bube lula.
Icebo # 1: Sebenzisa itemplate yesivumelwano somsebenzi Ukwenza uxwebhu olusemthethweni kwiphepha elingenanto kuyothusa, kwaye ayisiyiyo into endinokuyicebisa ngokuzithemba. Endaweni yokusebenza nzima kunokufuneka, qala ngesampulu yesivumelwano sengqesho. Ungafumana la maxwebhu kwizibonelelo ezininzi ze-Intanethi, kubandakanya ezinye zezixhobo ezidweliswe ngaphambili kwesi sikhokelo. , gcwalisa nje imigaqo kunye neemeko zengqesho yenkampani yakho kunye naloo msebenzi. Ungasoloko ukongeza, ushiye, okanye uqhubekeke wenze ngokwezifiso ezi templates ukuze zilungele iimfuno zakho. Ulwazi oluninzi luya kubakho. Kwiimeko ezininzi, yinto nje yokutshintsha igama lomqeshwa, umhla wokuqalisa, kunye neenkcukacha zokuhlawula.Abameli bezabasebenzi abangoogqwetha. Nanini na xa usenza ikhontrakthi esemthethweni ebophelelayo, kuya kufuneka ufune iingcebiso kumagqwetha. Abantu abaninzi bazama ukwenza ikhontrakthi yengqesho ngokwabo, kodwa bashiye iinkcukacha ezibalulekileyo ezibeka ishishini kwindawo elungileyo. . Mna Kwezinye iimeko, amaxwebhu alungiswe ngendlela eyiyo kangangokuba angaze ame enkundleni.
Ziphephe ezo ntloko ngokufowunela imizuzu emihlanu. Ngenye indlela, ungancokola bukhoma negqwetha kwi-intanethi. Nokuba ufuna ukwenza uxwebhu ngokwakho, qiniseka ukuba igqwetha lakho liyalijonga kwakhona ngaphambi kokulithumela kwirejista entsha yokutyikitya. Igqwetha linokubiza kakhulu, kodwa le ndleko iphantsi xa ithelekiswa iintloko kunye neendleko ezinokubakho ezinxulunyaniswa nesivumelwano se-shoddy.
Ingcebiso # 3: Qwalasela umsebenzi ngaphambi kokubhala ikhontrakthi
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, bonke abasebenziawudingi ukuba nesivumelwano. Ungonga ixesha elininzi ngokutsiba ikhontrakthi ngokupheleleyo ukuba umsebenzi awuyidingi. Umzekelo, ukuba uqhuba ivenkile ye-ayisi khrim kwaye uqeshe abafundi bexeshana ehlotyeni, wena mhlawumbi awudingi kuxwebhu olude olusemthethweni. Kodwa ukuba usebenzisa iarhente yokuthengisa ephakathi kwaye uqesha i-CFO entsha, ikhontrakthi yengqesho iya kufaneleka ngakumbi. kufanelekile apha. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba lulwazi olubuthathaka.
Ingcebiso # 4: Yiba bhetyebhetye
Kubalulekile ukuba uqonde ukuba ikhontrakthi yengqesho ayisiyondlela inye. Omabini la maqela (umqeshwa kunye nomqeshi) bobabini bakhuselwe sisivumelwano. Abanye babanini bamashishini benza impazamo yokuchaneka kakhulu.kwisivumelwano esibanceda emva koko, kuphela ukufumanisa ukuba ikhontrakthi ayisazifezekisi iimfuno zabo zexesha elizayo. Umzekelo, masithi uqasha umntu osisigxina kwisivumelwano seminyaka emibini. Kodwa emva kweenyanga ezintandathu, ishishini lakho liyakhula, uyalakha kwakhona kwaye uthathe isigqibo sokuba awusadingi msebenzi. Ukugxothwa kwalomqeshwa ngaphandle kwesizathu kungathathelwa ingqalelo njengokwaphula ikhontrakthi, ukuba nje umqeshwa uya kuhlala kwisiphelo sesivumelwano. Ke zama ukunqanda ukuzivalela kumagama athile anokutshintsha emsebenzini. ikamva.
Kufuneka wenze ntoni ngokulandelayo
I-5 yeeplagi ezihambelanayo zokudibanisa (+ iingcebiso ezi-3 zokunyusa ukuthengisa)
2021-06-19 14:51:12 | Indawo yewebhu
Ngaba ujonge elona qhagamshelo lilungileyo lokudibanisa imaski kwiWebhusayithi yakho yeWordPress, kodwa ungaqiniseki ngokhetho olufanelekileyo? Ukuthengisa ngokudibeneyo kunokuba yenye yeendlela ezizezona zinengeniso yokwenza ingeniso yokungena kodwa njengoko ushumeka amakhonkco obulungu kumxholo we...
Imixholo engama-34 yemixholo ephucukileyo yamagama ngo-2021
2021-06-19 05:39:33 | Iwebhusayithi
Uzigcinile izithethi zakho. Utshixe indawo. Ikhalenda icwangciselwe uT. Wenze uluhlu lweendwendwe kwaye ukulungele ukuthumela izimemo zakho. Ngoku konke okufuneka ukwenze kukwazisa umcimbi wakho wamva nje, kwaye yeyiphi indlela ebhetele yokwenza oko ngaphandle kwewebhusayithi enye? I-WordPress CMS i...
Iiplagi ze-WordPress ze-8 ezilungileyo kakhulu
2021-06-19 05:29:04 | Iwebhusayithi
I-Pinterest inabasebenzisi abaphantse babe zizigidi ezingama-500 ezisebenzayo, ezenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zonxibelelwano zentlalo zibalaseleyo kwihlabathi kunye nokhetho oluphezulu lokuqhuba ukugcwala kwabantu abafanelekileyo kwiwebhusayithi yakho yeWordPress. iiposti zebhlog, imifanekiso k...
Eyona nto iguqukayo yokuthenga iivenkile zokuncedisa ukugcina imbuyekezo
2021-06-18 13:42:39 | Indawo yewebhu
Eyona ndawo iVenkile yokuGuqulwa kweeVenkile eziGqibeleleyo zokuNyusa iiRhafu zoRhwebo Amashishini anikezelwe kuyo nayiphi na into encinci ayabonakala ngakumbi kwaye asebenze xa bekho kwiwebhu. Ukukhangela kuGoogle yindawo yokuqala ekubhekiswa kuyo ngumthengi wale mihla xa efuna uhlobo olufanelekile...
Eyona mxholo wegama liphezulu ukunika indawo yakho ubuchwephesha
2021-06-18 13:37:56 | Indawo yewebhu
Ngaba ucinga ngokudala iwindow yomthengi kwishishini lakho le-IT? Okulandelayo, kufuneka uqiniseke ukuba iwebhusayithi yakho ikukhonza. Ngaba ufuna ukukhuthazwa? Skrolela ngononophelo kwingqokelela yemixholo yekhompyuter yeWordPress engezantsi kwaye ujonge ukuba ikhona into oyifunayo. Amava omsebenz...
I-19 yeetemplate zewebhusayithi yomculi olungele ukuhamba ngomnxeba 2021
2021-06-18 13:31:51 | Indawo yewebhu
Ukuba ngumntu oyilayo njengawe, kubalulekile ukukunceda wenze iwebhusayithi yokuwisa umhlathi usebenzisa enye yeetemplate zeyona mzimba yewebhu sikulungiselele yona. zilahlekile Bonisa italente yakho ephambeneyo kunye nomsebenzi obalaseleyo kwaye ufumane iiprojekthi ngoncedo lwewebhusayithi enyanzel...
Izikhokelo zeWebhusayithi ezingama-26 zeAce 2021 kubukho beWebhu
2021-06-18 13:19:17 | Indawo yewebhu
Abantu aboyilayo, iiarhente, amashishini kunye nemibutho, iitemplate zewebhusayithi ezinobuchule zilungele ukuziguqula zibe ziiwebhusayithi ezisebenzayo. Yandisa ukufikelela kwakho kwaye wandise amandla akho ukuya kwelona liphezulu. Ngamakhulu, ukuba ayingamawaka eemveliso ezikhoyo, sidibanise uluhl...
Isikhokelo saBaqalayo kwimisebenzi yabasebenzi
2021-06-17 05:35:36 | Indawo yewebhu
Ukubaluleka kwe-HR kwishishini kuhlala kuthathelwa ingqalelo. Lelinye lawona masebe abaluleke kakhulu kuba imisebenzi ephantsi kodidi lwe-HR yinxalenye yeshishini ngalinye. I-HR yindawo yokuqala yokuqesha umnxeba kwishishini, kwaye onke amanyathelo ayenzeka apha endleleni, kubandakanya ukunyuselwa, ...
Uyenza njani ibhajethi yomvuzo
2021-06-17 04:50:29 | Indawo yewebhu
Ukuhlawulwa komrholo yenye yezona ndleko zinkulu zeshishini, zihlala zibala malunga neepesenti ezingama-20 zeendleko zombutho. Ukuyityeshela le nto yomgca ubalulekileyo kunokukhokelela ngokukhawuleza kwinto engalawulekiyo kwindleko yokwenza ishishini. Ngabasebenzi abaguquguqukayo, awudingi ibhola ye...
2021-06-17 04:05:19 | Indawo yewebhu
I-MyCompanyWorks sele ikho phantse iminyaka engamashumi amabini. Kule minyaka idlulileyo, bancedile ukwenza ngaphezulu kwamashishini angama-60,000 kuluhlu olubanzi lwamashishini kuwo onke amazwe angama-50. Bonelela ngeenkonzo zokuqalisa ishishini kwii-LLC, ii-C kunye nemibutho engu-S. I-MyCompanyWor...
Isikhokelo esigqibeleleyo kuCwangciso lweWebhusayithi
2021-06-16 06:35:29 | Indawo yewebhu
Ukubhengezwa: Lo mxholo uxhaswa ngabafundi oko kuthetha ukuba xa ucofa kwamanye amakhonkco ethu singafumana ikhomishini. Lonke uluhlu lwewebhusayithi oluyimpumelelo luqala ngesicwangciso esomeleleyo. Nokuba uqala ibhlog, indawo yakho, okanye iwebhusayithi yeshishini, esi sikhokelo siza kukubonisa ii...
Uyenza njani ifom ye-Intanethi engaphantsi kwemizuzu eli-10
2021-06-16 03:40:01 | Indawo yewebhu
Ngaba ufuna ukuguqula abatyeleli abaninzi babe ngababhalisi basebenzise iifom ezikwi-intanethi kwindawo yakho? Iifom ezikwi-Intanethi zibambe ingqalelo yabafundi bakho kwaye ubenze babhalisele iincwadana zeendaba ze-imeyile okanye amanye amaphulo Esi sifundo siza kukubonisa indlela yokongeza iifom e...
Yintoni ispan kwi-html?
2021-06-13 22:09:18 | Iwebhusayithi
Kwizinto ezininzi ze-HTML oza kudibana nazo kuhambo lwakho lokuqonda isiphelo esingaphambili, isithuba sesinye oya kusibona rhoqo. Kodwa, ngokungafaniyo nezinye izinto, ithegi iyodwa ayenzi uhlobo oluthile lwento yephepha. Kuqala, inokudideka: yintoni into ekulungele ngokwenene? Izinto zeSpan zinika...
Iitemplate ze17 zeMvumi yeWebhusayithi yeemvumi kunye neebhendi 2021
2021-06-13 13:58:46 | Indawo yewebhu
Ukuba ungumculi ozibonakalisa ngeetoni ezithandekayo, ezi templates zeemvumi zewebhusayithi ziya kuba zilungele wena. Izixhobo ezikhawulezayo nezifanelekileyo zokwakha iiwebhusayithi ezinkulu ukukhuthaza umculo wakho kwihlabathi Nabani na obesenza apha ekuhlaleni kwaye uhlala kude kube ngoku, lixesh...
Iiplagi ezili-15 ezilungileyo zobulungu begama 2021
2021-06-12 20:15:45 | Indawo yewebhu
Nokuba usaqala okanye sele ufumene umkhondo, kunye neeplagi zobulungu beWordPress unokwenza imali kwiphepha lakho kwaye ulenze libe nengeniso. Nokuba yibhlog enomxholo okhethekileyo, iqonga elijolise kwikhosi, okanye ishishini elisekwe kubhaliso, nokuba yeyiphi na iprojekthi yakho, nge-plugin elungi...